ဘယျလိုခေါငျးဆောငျမှုပုံစံမြိုးတှနေဲ့ လုပျငနျးခှငျမှာ ကွုံရသလဲ
အလုပျမှာဘယျလိုခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ကွုံရသလဲ။ ဘယျလိုစီမံအုပျခြုပျမှုပုံစံတှနေဲ့ကွုံနရေသလဲ။ လုပျငနျးခှငျမှာရှိနသေူတှအေဖို့တော့ ခေါငျးဆောငျမှု ပုံစံမတူညီတဲ့ ခေါငျးဆောငျမှုတှေ၊ အုပျခြုပျပုံစနဈတှေ အမြိုးမြိုးကိုကွုံရမှာဖွဈပါတယျ။ ခေါငျးဆောငျကောငျး ဆိုတာဘယျလိုပုံစံလဲ။ အခုတဈပတျမှာတော့ လုပျငနျး ခှငျမှာပုံမှနျတှနေ့ကေဖြွဈတဲ့ ခေါငျးဆောငျမှုပုံစံ (၇) မြိုးကိုဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးလေးဖတျပွီး တဲ့အခါ ကိုယျက ဘယျလိုခေါငျးဆောငျမှုပုံစံတှနေဲ့ ကွုံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုလညျး ကိုယျ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံတှေ ကို အခှငျ့အလမျးဂြာနယျ ဖစျေ့ဘှတျချပခြေျ့မှာ ပွနျ လညျမြှဝနေိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုခေါငျးဆောငျမှုတှကေ လုပျငနျးခှငျမှာ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိသလဲ၊ ဘယျလို ခေါငျးဆောငျမှုတှကေတော့ ဘယျလိုသကျရောကျမှု တှဖွေဈစနေိုငျသလဲဆိုတာကို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
ဒီခေါငျးဆောငျမှုကတော့ လုပျငနျးခှငျမှာအမြား အားဖွငျ့ထိရောကျတဲ့ ခေါငျးဆောငျမှုပုံစံပါ။ ခေါငျး ဆောငျတှကေ ဆုံးဖွတျခကျြခမြယျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ အောကျခွအေဖှဲ့အစညျးက အသံတှေ၊ တုံ့ပွနျမှုတှေ ကိုအခွခေံပွီးမှ ဆုံးဖွတျခကျြခတြာမြိုးပါ။ ဒီမိုကရစေီ နိုငျငံရေးလိုမြိုး အောကျခွပွေညျသူတှရေဲ့အသံကိုနား ထောငျပွီး ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုလုပျတာမြိုးပါ။ လုပျငနျး ခှငျမှာလညျး ဒီပုံစံပါပဲ။ ခေါငျးဆောငျတှကေ ဆုံးဖွတျ ခကျြ၊ လုပျပိုငျခှငျ့တှကေို ကိုယျ့ရဲ့အဖှဲ့အစညျးတှဆေီက နအေကွံဉာဏျရယူတာ၊ သူတို့ရဲ့အမွငျကိုမေးမွနျးတာ၊ ဝနျထမျးတှရေဲ့စိတျကူးစိတျသနျးကိုအသိအမှတျပွုတာ စတာတှကေ လုပျငနျးခှငျအတှငျးက ဒီမိုကရစေီခေါငျး ဆောငျမှုပုံစံပါ။ ဒီခေါငျးဆောငျမှုပုံစံက ဘာကွောငျ့ အကြိုးသကျရောကျမှုဖွဈစသေလဲဆိုရငျ ဝနျထမျးတဈ ယောကျခငျြးဆီရဲ့လုပျပိုငျခှငျ့၊ ဆုံးဖွတျနိုငျခှငျ့တှကေို ခှငျ့ပွုထားလို့ပါပဲ။ ဝနျထမျးတဈယောကျခငျြးဆီမှာ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာအပွညျ့အဝပေးထားတာမြိုးပါ။
ဒီခေါငျးဆောငျမှုကိုတော့ သကျဦးဆံပိုငျခေါငျး ဆောငျမှုလို့ချေါကွပါတယျ။ "ဘယျသူမှဘာမှပွနျမ ပွောကွနဲ့ . .. ငါကခေါငျးဆောငျ. . .ငါလုပျခငျြ တာလုပျမယျ . . .ငါခိုငျးသလိုလုပျ" ဆိုတာမြိုးပါ။ ဒီလိုခေါငျးဆောငျမှုမြိုးကတော့ လုပျငနျးခှငျမှာအကြိုး သကျရောကျမှုမရှိပါဘူး။ ဒီမိုကရစေီခေါငျးဆောငျမှုနဲ့ ပွောငျးပွနျအခြိုးကပြါတယျ။ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာတှေ ကိုတဈဦးတဈယောကျထဲကခြုပျကိုငျထားပွီး အုပျခြုပျ မှုပုံစံပါ။ ဝနျထမျးတှကေိုတိုကျရိုကျညှနျကွားတဲ့စနဈဖွဈ ပါတယျ။ ဝနျထမျးတှရေဲ့အကွံပွုခကျြကိုနားမထောငျ ဘဲ ကိုယျ့ဆုံးဖွတျခကျြသာအမှနျဆိုတဲ့ခေါငျးဆောငျမှု မြိုးပါ။ ဒီလိုခေါငျးဆောငျမှုမြိုးရှိတဲ့လုပျငနျးခှငျက ဝနျထမျးကောငျးတှကေိုမကွာခဏဆုံးရှုံးရလရှေိ့ပါ တယျ။ ဒီဘကျခတျေမှာ ဒီလိုခေါငျးဆောငျမှုပုံစံက လုပျငနျးခှငျအတှကျ ထိခိုကျနဈနာမှုတှဖွေဈစပေါ တယျ။
ဒီခေါငျးဆောငျမှုကလညျး လုပျငနျးခှငျမှာ အကြိုး သကျရောကျမှုမြားပွီးထိရောကျတဲ့ ခေါငျးဆောငျမှုပုံစံ တဈမြိုးပါ။ မဟာဗြူဟာမွောကျစှာဦးဆောငျမှုပေးတဲ့ ခေါငျးဆောငျတှကေ ကုမ်ပဏီရဲ့အဓိကလညျပတျလုပျ ဆောငျမှုနဲ့ ကုမ်ပဏီဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကွားမှာရှိကွပါ တယျ။ ဒီခေါငျးဆောငျမှုက လုပျငနျးခှငျအတှကျ အကြိုးရှိစသေလို၊ ဝနျထမျးတှအေတှကျ ထိရောကျစှာ ခေါငျးဆောငျမှုပေးနိုငျပါတယျ။ မဟာဗြူဟာကကြ စဉျးစားတှေးချေါမှုပုံစံကို ကုမ်ပဏီအမြားအပွားက ကငျြ့သုံးလာကွပါတယျ။ ရာထူးအဆငျ့ဆငျ့ မတူညီကွ တဲ့ ဝနျထမျးတှအေပျေါမှာလညျး ဒီခေါငျးဆောငျမှုက အကြိုးသကျရောကျမှုဖွဈစပေါတယျ။
ဒီခေါငျးဆောငျမှုကတော့ လုပျငနျးခှငျမှာ တဈခါ တဈရံမှာအကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ ဒီခေါငျး ဆောငျမှုပုံစံက ဝနျထမျးတှကေို သကျသောငျ့သကျသာ ဖွဈတဲ့အနအေထားကနေ တှနျးထုတျပေးတဲ့ခေါငျး ဆောငျမှုမြိုးဖွဈပါတယျ။ အမွဲတမျးအပွောငျးအလဲ အတှကျ လှုံ့ဆျောပေးနတောဖွဈပါတယျ။ စိနျချေါမှု တှေ၊ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှနေဲ့ ဝနျထမျးတှကေို ကုမ်ပဏီတိုးတကျကွီးပှားလာဖို့ထိနျးညှိပေးတဲ့ခေါငျးဆောငျ မှုမြိုးပါ။ ဒါပမေဲ့ အသှငျကူးပွောငျးမှုနဲ့ခေါငျးဆောငျတဲ့ ခေါငျးဆောငျတှကေ တဈဦးခငျြးဆီရဲ့သငျယူလုပျ ဆောငျမှုတှေ၊ တိုကျရိုကျအစီရငျခံစာတှေ၊ တာဝနျ အသဈတှကေို မှနျကနျတဲ့နညျးပွမှုမရှိဘူးဆိုရငျတော့ ဝနျထမျးတဈဦးခငျြးစီရဲ့စှမျးရညျနဲ့လုပျဆောငျမှုတှကေို မကျြခွညျပွတျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဒီခေါငျးဆောငျမှုက အမွဲတမျးအတှကျအသုံးတညျ့ တာမဟုတျဘဲ တဈခါတဈရံသာအသုံးပွုသငျ့တဲ့ခေါငျး ဆောငျမှုပုံစံဖွဈပါတယျ။
ဒီခေါငျးဆောငျမှုကလညျး လုပျငနျးခှငျမှာ တဈခါတဈရံအကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ ခေါငျး ဆောငျတှကေ ဝနျထမျးတှကေိုသူတို့ရဲ့လုပျဆောငျမှု အတှကျဆုခြီးမွှငျ့ပွီး ဝနျထမျးတှစေိတျဓာတျတကျွှက ဖို့ဦးဆောငျပေးပါတယျ။ ဒီခေါငျးဆောငျမှုက ဝနျထမျး တဈဦးခငျြးစီရဲ့တာဝနျ၊ ဝတ်တရားတှကေိုပွီးမွောကျ အောငျလုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ဒီလုပျဆောငျ ခကျြတှကေ သူတို့တကယျစိတျပါလို့လုပျတာဟုတျခငျြ မှဟုတျပါမယျ။ ဒါပမေဲ့အခြိနျတနျရငျ အလုပျပွီးတာမြိုး ဖွဈပါတယျ။ ဝနျထမျးတှကေိုအလုပျတှအေခြိနျမီ ပွီး စီးအောငျ၊ ကိုယျ့တာဝနျကိုယျကအြေောငျလုပျဆောငျ တဲ့ခေါငျးဆောငျမှုပုံစံမြိုးပါ။
ဒီခေါငျးဆောငျမှုကလညျး လုပျငနျးခှငျမှာထိ ရောကျမှုရှိပွီး အကြိုးရှိတဲ့ခေါငျးဆောငျမှုဖွဈပါတယျ။ ဒီခေါငျးဆောငျမှုကတော့ အားကစားနညျးပွနဲ့ပုံစံတူ ပါတယျ။ ဝနျထမျးတဈယောကျခငျြးစီရဲ့ အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှကေိုသိအောငျလုပျပွီး သူတို့တှကေို မှနျကနျတဲ့တာဝနျပေးမှုတှေ၊ မှနျကနျတဲ့နရောခထြား မှုတှကေိုလုပျတဲ့ခေါငျးဆောငျမှုပုံစံပါ။ ဒီခေါငျးဆောငျ မှုက သူတို့ဦးဆောငျမှုအောကျမှာရှိတဲ့အဖှဲ့ကိုတခွား အဖှဲ့အစညျးထကျပိုမိုသာလှနျအောငျ နညျးဗြူဟာနဲ့ လုပျဆောငျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီခေါငျးဆောငျမှုက ဒီမိုကရစေီခေါငျးဆောငျမှုနဲ့ဆငျတူပါတယျ။ ဝနျထမျး တှကေိုလလေ့ာမှုအသဈတှေ၊ ကိုယျ့ရဲ့ကြှမျးကငျြမှုတှေ ကို ဆကျလကျဖှံ့ဖွိုးဖို့အခှငျ့အလမျးပေးတဲ့ခေါငျးဆောငျ မှုဖွဈပါတယျ။
ဒီခေါငျးဆောငျပုံစံကတော့ လုပျငနျးခှငျအတှကျ အကြိုးသကျရောကျမှုမရှိသလောကျပါပဲ။ စာအုပျကွီး အတိုငျးသှားတတျပါတယျ။ ဒီခေါငျးဆောငျမှုအောကျ မှာရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှကေ အာဏာရှငျခေါငျးဆောငျမှု အောကျမှာမဟုတျဘူးလို့ထငျရပမေဲ့ ကိုယျတိုငျပါဝငျ လုပျဆောငျနိုငျတဲ့အခနျးကဏ်ဍမရှိသလောကျနညျးပါး ပါတယျ။ ဒီအခကျြကဝနျထမျးတှရေဲ့တီထှငျဆနျးသဈ မှု၊ အိုငျဒီယာစတာတှကေို ရပျတနျ့စပေါတယျ။
အနှဈခြုပျဆိုရရငျ ဒီခေါငျးဆောငျမှုက လုပျငနျး တဈခုအတှကျ၊ အဖှဲ့အစညျးတဈခုအတှကျ၊ အသငျး အဖှဲ့တဈခုအတှကျ အငျမတနျအရေးကွီးတဲ့အခွခေံ အုတျမွဈတဈခုဖွဈပါတယျ။ မှနျကနျတဲ့ခေါငျးဆောငျမှု ကသာ တိုးတကျအောငျမွငျတဲ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မှုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြုံရသလဲ
အလုပ်မှာဘယ်လိုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကြုံရသ လဲ။ ဘယ်လိုစီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွေနဲ့ကြုံနေရသလဲ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေသူတွေအဖို့တော့ ခေါင်းဆောင်မှု ပုံစံမတူညီတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုတွေ၊ အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်တွေ အမျိုးမျိုးကိုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလဲ။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ လုပ်ငန်း ခွင်မှာပုံမှန်တွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ (၈) မျိုးကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီး တဲ့အခါ ကိုယ်က ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ကို အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေ့ခ်ျမှာ ပြန် လည်မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မှုတွေက လုပ်ငန်းခွင်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲ၊ ဘယ်လို ခေါင်းဆောင်မှုတွေကတော့ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု တွေဖြစ်စေနိုင်သလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဒီခေါင်းဆောင်မှုကတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာအများ အားဖြင့်ထိရောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံပါ။ ခေါင်း ဆောင်တွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းက အသံတွေ၊ တုံ့ပြန်မှုတွေ ကိုအခြေခံပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုးပါ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးလိုမျိုး အောက်ခြေပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနား ထောင်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တာမျိုးပါ။ လုပ်ငန်း ခွင်မှာလည်း ဒီပုံစံပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်တွေက ဆုံးဖြတ် ချက်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆီက နေအကြံဉာဏ်ရယူတာ၊ သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းတာ၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအသိအမှတ်ပြုတာ စတာတွေက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက ဒီမိုကရေစီခေါင်း ဆောင်မှုပုံစံပါ။ ဒီခေါင်းဆောင်မှုပုံစံက ဘာကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသလဲဆိုရင် ဝန်ထမ်းတစ် ယောက်ချင်းဆီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်တွေကို ခွင့်ပြုထားလို့ပါပဲ။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းဆီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပြည့်အဝပေးထားတာမျိုးပါ။
ဒီခေါင်းဆောင်မှုကိုတော့ သက်ဦးဆံပိုင်ခေါင်း ဆောင်မှုလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ "ဘယ်သူမှဘာမှပြန်မ ပြောကြနဲ့ . .. ငါကခေါင်းဆောင်. . .ငါလုပ်ချင် တာလုပ်မယ် . . .ငါခိုင်းသလိုလုပ်" ဆိုတာမျိုးပါ။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မှုမျိုးကတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာအကျိုး သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ပြောင်းပြန်အချိုးကျပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေ ကိုတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကချုပ်ကိုင်ထားပြီး အုပ်ချုပ် မှုပုံစံပါ။ ဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားတဲ့စနစ်ဖြစ် ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကြံပြုချက်ကိုနားမထောင် ဘဲ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်သာအမှန်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှု မျိုးပါ။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မှုမျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်က ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကိုမကြာခဏဆုံးရှုံးရလေ့ရှိပါ တယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မှုပုံစံက လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်စေပါ တယ်။
ဒီခေါင်းဆောင်မှုကလည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ အကျိုး သက်ရောက်မှုများပြီးထိရောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ တစ်မျိုးပါ။ မဟာဗျူဟာမြောက်စွာဦးဆောင်မှုပေးတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကလည်ပတ်လုပ် ဆောင်မှုနဲ့ ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြားမှာရှိကြပါ တယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်မှုက လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အကျိုးရှိစေသလို၊ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ထိရောက်စွာ ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာကျကျ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံကို ကုမ္ပဏီအများအပြားက ကျင့်သုံးလာကြပါတယ်။ ရာထူးအဆင့်ဆင့် မတူညီကြ တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာလည်း ဒီခေါင်းဆောင်မှုက အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီခေါင်းဆောင်မှုကတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ခါ တစ်ရံမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီခေါင်း ဆောင်မှုပုံစံက ဝန်ထမ်းတွေကို သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်တဲ့အနေအထားကနေ တွန်းထုတ်ပေးတဲ့ခေါင်း ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲ အတွက် လှုံ့ဆော်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှု တွေ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကုမ္ပဏီတိုးတက်ကြီးပွားလာဖို့ထိန်းညှိပေးတဲ့ခေါင်းဆောင် မှုမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက တစ်ဦးချင်းဆီရဲ့သင်ယူလုပ် ဆောင်မှုတွေ၊ တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံစာတွေ၊ တာဝန် အသစ်တွေကို မှန်ကန်တဲ့နည်းပြမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်နဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို မျက်ခြည်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီခေါင်းဆောင်မှုက အမြဲတမ်းအတွက်အသုံးတည့် တာမဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်ရံသာအသုံးပြုသင့်တဲ့ခေါင်း ဆောင်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခေါင်းဆောင်မှုကလည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ခါတစ်ရံအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ခေါင်း ဆောင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှု အတွက်ဆုချီးမြှင့်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေစိတ်ဓာတ်တကြွ်က ဖို့ဦးဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်မှုက ဝန်ထမ်း တစ်ဦးချင်းစီရဲ့တာဝန်၊ ဝတ္တရားတွေကိုပြီးမြောက် အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ဆောင် ချက်တွေက သူတို့တကယ်စိတ်ပါလို့လုပ်တာဟုတ်ချင် မှဟုတ်ပါမယ်။ ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ရင် အလုပ်ပြီးတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်တွေအချိန်မီ ပြီး စီးအောင်၊ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေအောင်လုပ်ဆောင် တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံမျိုးပါ။
ဒီခေါင်းဆောင်မှုကလည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာထိ ရောက်မှုရှိပြီး အကျိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်မှုကတော့ အားကစားနည်းပြနဲ့ပုံစံတူ ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီး သူတို့တွေကို မှန်ကန်တဲ့တာဝန်ပေးမှုတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့နေရာချထား မှုတွေကိုလုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံပါ။ ဒီခေါင်းဆောင် မှုက သူတို့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုတခြား အဖွဲ့အစည်းထက်ပိုမိုသာလွန်အောင် နည်းဗျူဟာနဲ့ လုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်မှုက ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ဝန်ထမ်း တွေကိုလေ့လာမှုအသစ်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ကို ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ခေါင်းဆောင် မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခေါင်းဆောင်ပုံစံကတော့ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသလောက်ပါပဲ။ စာအုပ်ကြီး အတိုင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်မှုအောက် မှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်မှု အောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမရှိသလောက်နည်းပါး ပါတယ်။ ဒီအချက်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့တီထွင်ဆန်းသစ် မှု၊ အိုင်ဒီယာစတာတွေကို ရပ်တန့်စေပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်ဆိုရရင် ဒီခေါင်းဆောင်မှုက လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်၊ အသင်း အဖွဲ့တစ်ခုအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံ အုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှု ကသာ တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။